ဒီကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဦးဇင်းကို လူတော်တော်များ မေးကြပါတယ်။ ခဏခဏလည်း ဖြေပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကံနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ယောင်ဝါးဝါးနားမလည် ဖြစ်နေကြတယ် ထင်ပါဘိ။ အဲဒါကြောင့် ဒီတစ်ခါတော့ ဦးဇင်း တတ်သိလေ့လာထားသမျှကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း စုံစုံလင်လင်ဖြစ်အောင် ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ ပွင့်လင်းအားကြီးလို့ လူကြီးလူကောင်းများအနေဖြင့် မသုံးသင့်တဲ့ မပြောသင့်တဲ့စကားလုံးများ ပါနေလျှင်လည်း နားနှင့်မနာ ဖ၀ါးနှင့်နာပါလို့ပဲ တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ လူငယ်များ ဒီကံနှင့်ပတ်သတ်ပြီး နားရှင်းကာ ရှောင်ကြဉ်လိုက်နာနိုင်အောင် ယခုအောက်က မေးထားတဲ့ မေးခွန်းကိုပါ တစ်ဆက်တည်း ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ အမေးနှင့် အဖြေလေးကတော့ဒီလိုပါ။
အရှင်ဘုရားတပည့်တော် ရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား။ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရကံနှင့် ပတ်သက်၍ သေချာစွာသိရှိလိုပါသဖြင့် မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘုရား။
(၁) ကာမပိုင် မိဘမှအစ ဆွေမျိုး၊ ရပ်ဆွေရပ်မျုိုးများ မရှိတော့သော အမျိုးသား အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ကျူးလွန်လျှင် အပြစ်မဖြစ်ဘူး ဆိုသည်မှာ ဟုတ်ပါသလားဘုရား။
(၂) အရူးမများအား ကျူးလွန်လျှင်လည်း အပြစ်မဖြစ်ဘူးဆိုသည်မှာ ဟုတ်ပါသလားဘုရား။
(၃) မိမိ ကာမပိုင်သောအမျိုးသမီးရှိသော်လည်း အပျော်မယ်များနှင့် ပျော်ပါးခြင်းစသည်များသည်လည်း အပြစ်ကျူးလွန်ရာ ရောက်ပါသလားဘုရား။
(၄) ၄င်းအပြင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှ နောက်တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ထပ်ယူခြင်းသည် အပြစ် သင့်ပါသလားဘုရား။
(၅) တပည့်တော်တို့ မြန်မာသမိုင်းတွင် ဘုရင်အဆက်ဆက်သည် အမျိုးသမီးများစွာထားရှိပါသည်ဘုရား။ ထိုမင်းများသည် မင်းကျင့်တရားနဲ့ ညီညွတ်ပါသလားဘုရား။
(၆) ထို့ပြင် သိကြားမင်းသည်လဲ နတ်ပြည်တွင် နတ်သမီး (၂၅၀၀၀၀၀၀)နှင့်နေခြင်းသည် ဘယ်လိုဘုန်းကံမျိုးပါလဲဘုရား။
(၇) မိဘအုပ်ထိန်းသူအောက်တွင်ရှိသော အမျုိုးသမီးနှင့် ရယ်ငန်၍ ကျူးလွန်နေကြသော်လည်း (အမျိုးသမီးသည် ခွင့်ပြုကြည်ဖြူ၏) နောင်တွင် လက်ထပ်ယူကြလျင်လည်း အပြစ်ဖြစ်ပါသလားဘုရား။ မည်ကဲ့သို့အပြစ်ရှိပါသလဲဘုရား။ ကံကိုကျူးလွန်တိုင်း အပြစ် ဖြစ်ပါသလားဘုရား။
အထက်ပါမေးခွန်းများကို တပည့်တော်အား အစဉ်သနားခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ ဖြေကြားပေးတော်မူပါဘုရား။
အင်း ပထမဦးဆုံး ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိထားရမည်က လောကတွင် လောက၀စ္စ၊ ပဏ္ဏတ္တိဝစ္စဟု နှစ်မျိုးရှိရာ ဒီကံတရားသည် လောက၀စ္စထဲတွင် ပါဝင်ပေသည်။ လောက၀စ္စဆိုသည်မှာ မိမိနှင့်ကိုယ်ချင်းစာပြီး နားလည်သိရှိ သဘောပေါက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သူတစ်ပါးသားမယားကို မိမိက ကျုးလွန်မယ်လို့ စိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ မိမိစိတ်ထဲမှာ ဒီလိုလေး တွေးတောကြည့် သင့်ပါတယ်။ ငါကျုးလွန်မဲ့ မိန်းကလေးဟာ ငါ့ရဲ့ မိခင်၊ အမ၊ နှမဆိုလျှင်ရော ငါဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ အဲဒီလိုတွေးတောတဲ့အခါမှာ မိမိရဲ့မောင်နှမ ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် မိမိစိတ်ရဲ့ ခံစားချက်အတိုင်း တစ်ဘက်လူမှာလည်း သူနဲ့ဆက်စပ်သူများ ဘယ်လိုခံစားရမယ် ဆိုတာ တွေးဆကြံဆနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံကို မကျုးလွန်မိအောင် ရှောင်ကြဉ် သင့်ပါတယ်။
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံထိုက်သည့် အင်္ဂါရပ်များကို ပထမဦးဆုံး ပြောပြပါမယ်။
၁။ အဂမနိယဌာနတာ - မသွားလာအပ်သော အရာဌာနဖြစ်ခြင်း။
၂။ သေ၀နာစတ္တံ - မှီဝဲလိုသော စိတ်ရှိခြင်း။
၃။ မဂ္ဂေနမဂ္ဂပဋိပတ္တိ - မဂ်ခေါ်လိင်ဖြင့် လိင်ထဲသို့ သွင်းခြင်း။
၄။ သာဒိယနံ - သာယာခြင်း။
ဒီအင်္ဂါ (၄)ရပ်လုံးပြည့်စုံမှ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံထိုက်ပါတယ်။ ဒီလေးပါးထဲက အင်္ဂါတစ်ပါးပါး ချို့ယွင်းလျှင် ကံမထိုက်ပေ။ သို့သော် တစ်ပါးပါးကျုးလွန်မိလျှင် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံလောက် အပြစ်မကြီးသော အကုသိုလ်၊ ဝဋ္ဋ်ကြွေးတော့ ဖြစ်သည်။
သူတပါး၏ ခင်ပွန်း၊ ဇနီး၊ မယားတို့ကို သဘောတူ၍ဖြစ်စေ၊ မတူပဲဖြစ်စေ ပြစ်မှားကျူးလွန်ခြင်းကို ပါရဒါရကံ ဟုခေါ်သည်။ ပရဒါရကံက ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံထက် ပို၍ အပြစ်ကြီးပါသည်။ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံထက်ပို၍ ဆိုးရွှားသော အပြစ်ထိုက်သည်။ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ဆိုသည်မှာ မိမိတရားဝင်ယူထားသော ယူထားသူမှအပ အုပ်ထိန်းခြင်းမကင်းသော မိန်းမ(၂၀)ကို သဘောတူ၍ဖြစ်စေ၊ မတူ၍ဖြစ်စေ ကာမဆက်ဆံလျှင် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံထိုက်ပေသည်။
၃။ အမိအဘစုံ အုပ်ထိန်းသောသူ။
၄။ မောင်ကြီး မောင်ငယ် အုပ်ထိန်းသောသူ။
၅။ အမကြီး အမငယ် အုပ်ထိန်းသောသူ။
၆။ ဆွေမျိုးတို့ အုပ်ထိန်းသောသူ။
၇။ အမျိုးအနွယ်တို့ အုပ်ထိန်းသောသူ။
၈။ အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေသီတင်းသုံးဖော်တို့ အုပ်ထိန်းသောသူ။
၄င်းမိန်းမ(၈)ဦးတို့ကို ကျူးလွန်လျှင် ယောက်ျားတွေမှာသာ ကံထိုက်၍ မိန်းကလေးများမှာ ကံမထိုက်ပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုမိန်းကလေးများသည် သူတို့ကာမကို သူတို့ပိုင်သေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မိဘစသော အုပ်ထိန်းစောင့်ရှောက်သူများကို တစ်ပါးသူက တရားဝင် မတောင်းယူရသေးသောကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။ ခုခေတ် မြန်မာ လူဘောင်လောကမှာ ကိုယ်အချင်းချင်း သဘောတူရင် မပြစ်မဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ အနောက်တိုင်း အယူအဆတွေ ၀င်ရောက်လာပါတယ်၊ အမှန်က အဲဒီလို မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်အချင်းချင်း ဘယ်လိုပဲ သဘောတူနေပါစေ သူ့ကိုထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်တဲ့ သူတွေရှိပါတယ်။
၉။ ထိန်းမြား (တစ်နည်း) လက်ထပ်ပြီးသောသူ။
၁၀။ ဘုရင်ကောက်ယူရန် သတ်မှတ်ထားသောသူ။
၁၁။ ဥစ္စာဖြင့် ၀ယ်ယူထားသောသူ (ပြည်တန်ဆာမ)။
၁၂။ အလိုတူ ပေါင်းသင်းနေသောသူ။
၁၃။ ပုဆိုးတန်းတင် ပေါင်းသင်းနေသောသူ။
၁၄။ စည်းစိမ်ကိုပေး၍ ပေါင်းသင်းနေသောသူ။
၁၅။ ရေခွက်၌ လက်ဆုံချ၍ မိဘက ပေးစားထားသောသူ။
၁၆။ ခေါင်းခုချ၍ လင်မယားအဖြစ် နေသောသူ။
၁၇။ ကျွန်ကို မယားပြုထားသောသူ။
၁၈။ အမှုလုပ်ကို မယားပြုထားသောသူ။
၁၉။ စစ်မြေပြင်မှ သုံးပန်းရခဲ့သောသူ။
၂၀။ ခေတ္တမျှပေါင်းရန် ငှားယူထားသောမိန်းမ တို့ပင် ဖြစ်ပေသည်။
ထိုတွင် အမှတ်(၉)မှ(၂၀)ထိ မိန်းမ(၁၂)ယောက်အနက် တစ်ယောက်ယောက်ကို လွန်ကျူးလျှင် ယောက်ျားရော မိန်းမပါ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ထိုက်ပေသည်။ ထို့ပြင် မိမိမယားပင် ဖြစ်စေကာမူ အောက်ပါအကြောင်း (၄)ပါကြောင့်လည်း ကံထိုက်ပါသည်။
၁။ ကိုယ်ဝန် အလွန်ရင့်သောအခါ။
၂။ မိဘ၊ဆရာ၊ သူတကာမြင်၍မသင့်သောနေရာ။
၃။ ကျင့်ရိုး ကျင့်စဉ် မဟုတ်သော နည်းစနစ်များဖြင့် ကျင့်ခြင်း။
၄။ ဆေးဝါးမှီးဝဲ ရှိမြဲအင်္ဂါထက် လွန်နေခြင်းတို့ပင် ဖြစ်ပေသည်။
ဒကာမေးထားတဲ့ မေးခွန်းများကို ဦးဇင်းတစ်ခုချင်းစီ ထပ်ရှင်းပြပေးပါမယ်။ နံပါတ်(၁-၂)သည် အထက်ပါအုပ်ထိန်းသူ (၂၀)ထဲ မပါရှိလျှင်တော့ အပြစ်မရှိပါ။ အုပ်ထိန်းသူရှိနေလျှင်တော့ အပြစ်ရှိပေသည်။
နံပါတ်(၃)သည် မိမိမှာ ကာမပိုင်ရှိသောကြောင့် မည်သည့်မိန်းမမျိုးနှင့်မဆို ကျူးလွန်လျှင် အပြစ်ရှိပေသည်။
နံပါတ်(၄) အုပ်ထိန်းသူခွင့်ပြုချက်ရ၍ နောက်ထပ်မိန်းမယူလျှင် မိမိသည် တရားဝင် တောင်းယူထားသောကြောင့် အပြစ်မရှိပါပေ။
နံပါတ်(၅) ဘုရင်များသည် မိဖုရားကောက်ယူရာ၌ တရားဝင်လက်ထက်ယူထားလျှင် အပြစ်မရှိပေ။ တိတ်တိတ်ပုန်းယူလျှင်တော့ မင့်ကျင့်တရား၌လည်း ငါးပါးသီလ လုံခြုံရမည့်ဖြစ်၍ အပြစ်ရှိပြီး မင့်ကျင့်တရားနှင့်မညီပေ။
နံပါတ်(၆) သိကြားမင်းသည် အရင်လူ့ဘ၀က မာဃအမည်နှင့် လမ်းပြင်ခြင်း၊ တံတားဆောက်ခြင်း၊ ဇရပ်ဆောက်ခြင်းစတဲ့ ကောင်းမှုများ လုပ်ခဲ့၍ သိကြားမင်းဖြစ်ပြီးလျှင် ယခုပွင့်ခဲ့တဲ့ ဂေါတမဘုရားရှင်လက်ထက်တွင် ဘုရားရှင်ထံခဏခဏသွားပြီး တရားနာခဲ့ခြင်းကြောင့် သောတာပန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲဒီသောတာပန်ဖြစ်ပြီးနောက် အရင်သိကြားမင်း ဘ၀ကနေ ယခုတစ်ဖန်ဆက်လက်ပြီး သိကြားမင်း ဖြစ်ရပါတယ်။ နတ်မိဖုရားများရခြင်းကတော့ နတ်သမီး ဖြစ်လာမည့်သူများသည် နတ်သားများ၏ ဗိမာန်တွင်း၊ ဗိမာန်ရှေ့တည့်တည့်တွင် မဖြစ်ဘဲ လေးဘက်လေးလံ နတ်သားများ၏ဗိမာန်ကြားတွင် လာဖြစ်ပါက သိကြားမင်းသည် နတ်သားများ အငြင်းပွားစရာ လုစရာ ဖြစ်နေလျှင် သူကပဲ ကောက်ယူခြင်းကြောင့် နတ်မိဖုရားများရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
နံပါတ်(၇) မိန်းကလေးဘက်က ကြည်ဖြူသော်လည်း မိဘစသောအုပ်ထိန်းသူများထံ တရားဝင်ခွင့်မတောင်းရသေးဘဲ ကျုးလွန်လျှင် အပြစ်ရှိပေသည်။ စေ့စပ်ခြင်းစသည့် တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူများထံ ခွင့်တောင်းပြီးသားဖြစ်လျှင်တော့ တကယ်လည်း တရားဝင်လက်ထက်ယူဖြစ်ပါက အပြစ်မရှိပါပေ။
လောကမှာ ကျင်လည်ကျက်စားနေကြတဲ့ သတ္တ၀ါမှန်သမျှဟာ သတိလက်လွတ်မှုကြောင့် မမှားသင့်တဲ့ အမှားလေးတွေ မှားနေကြပါတယ်။ တချို့အမှားလေးတွေကျတော့ မိမိဘက်က မှန်တယ်ထင်ရပေမဲ့ သူတော်ကောင်းတွေ အမြင်မှာတော့ မှားတဲ့အရာဖြစ်နေပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်တွင် လူငယ်များဟာ ကာမကိစ္စများနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မှားသင့်တဲ့အရာလား၊ မမှားသင့်တဲ့ အရာလားဆိုတာ ခွဲခြားဝေဖန်ခြင်း လေ့လာခြင်းမရှိဘဲ စိတ်ကိုအလိုလိုက်ကာ အလွယ်တကူ မှားယွင်းနေကြပါတယ်။ တကယ်ဆို ကာမအမှုဟာ မိမိအတွက် အပြစ်နဲ့အကျိုး ဘယ်ဟာက ပိုများသလဲဆိုတာ စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။
ဒါပြင် ယခုခေတ်လူငယ်များ ကျုးလွန်နေကြတဲ့ ကာမမှုများဟာ များသောအားဖြင့် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံနဲ့ မကင်းဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ မိမိတို့ဟာ ဘယ်လိုမိန်းမယောက်ျားနဲ့ ကျုးလွန်ရင် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ထိုက်မလဲဆိုတာ သေချာမသိကြပါ။ တချို့ကျတော့လည်း သိသိကြီးနဲ့ မိုက်နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါမယ်။ အဲဒီလိုမိုက်နေတာဟာ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံရဲ့ ဆိုးကျိုးများကို မိမိတို့က သေချာမစဉ်းစား မလေ့လာထားလို့ပါ။ တကယ်တမ်း လေ့လာဆင်ခြင် စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ဒီကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံရဲ့အကျိုးဟာ မျက်မှောက်တမလွန် နှစ်ဘ၀လုံးအတွက် ဘယ်လောက် အန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာ သိပါလိမ့်မယ်။
****ခုတော့ အဲဒီလိုမသိတဲ့အတွက် ယနေ့ခေတ်လူငယ်များဟာ ကာမကိစ္စကို အလွယ်တကူ ဘာမှမဖြစ်ဟုထင်နေပြီး ကျုးလွန်နေကြပါတယ်။ ဒါဟာလည်း တခြားနိုင်ငံက ကံတရား “ကံ” ကံ၏အကျိုးပေးကို မယုံကြည်ကြတဲ့လူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်များကို အတုယူလို့လည်း မမှားသင့်တာ မှားနေကြတာပါ။ မိန်းကလေးများကလည်း မိမိတို့ဣနြေ္ဒသိက္ခာကို မထိန်းဘဲ ဒီလိုပြုကျင့်ခံရတာဟာ ထည့်တွက်စရာ မလိုပါလို့ ထင်ထားသော်လည်း နောက်ပိုင်း မဖုံးနိုင်မဖိနိုင်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်ရင်သွေးရဲ့ အသက်ကိုတောင် အလွယ်တကူ သတ်ဖြတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ တစ်မှုကနေနှစ်မှုထိ အဆင့်တိုးကာ မကောင်းမှုများ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီလို လူသားတိုင်းမှာ မကောင်းမှုတွေ များလာမယ်ဆိုရင် သဘာဝကပ်ဆိုးတွေကလည်း ဖြစ်လာမှာပါ။ အဲဒီတော့ သဘာဝကပ်ဆိုးတွေက လွတ်ကင်းပြီး နောက်နောင်ဘ၀တွေမှာလည်း ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ရအောင် ကာမအမှုအမှားများမှ ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။*****
ယခုခေတ်တွင် နိုင်ငံတိုင်း၌ မေထုန်မှုပြုလုပ်ခြင်းကို ခေတ်စားနေလောက်အောင် လူသားတို့စိတ်တွင် အာရုံပြု ကျုးလွန်းနေကြသည်ကို စာဖတ်သူတို့ မြင်ဖူးကြားဖူးပေလိမ့်မည်။ ခေတ်ကာလသည် ကိလေသာများ များပြားလာသော ခေတ်လာလဖြစ်လာသည့်နဲ့အမျှ လူသားစိတ်တို့တွင် ကာမစိတ်များ မွန်ထူလျက်ရှိနေကြပေသည်။
ထို့တွင် မိန်းကလေးများနှင့် ကောင်လေးများ မသိသလိုလို သိသလိုလိုနဲ့ ကျူးလွန်နေသော အပြစ်များသည် ကြာလေဆိုးရွားစွာ ဖြစ်လာလေဟု ထင်မြင်မိပါသည်။ ထိုသို့ပြုမှုခြင်းများသည် သိရဲ့သားနဲ့ လုပ်တာလား မသိလို့များ လုပ်နေကြတာလားဟု စဉ်းစားမရ၍ မေထုန်မှုကိစ္စများနဲ့ ပတ်သတ်သော သိသင့်သော အကြောင်းအရာများကို အနည်းငယ်တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
အိမ်ထောင်ရှိပြီးသားသူများက ကျန်တစ်ပါးသူနဲ့ ကျုးလွန်လျှင် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံထိုက်၍ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာ သိပေကြလိမ့်မည်။ သိရက်နဲ့ မိုက်တာသာ ဖြစ်ပေမည်။ အိမ်ထောင်မပြုသေးသူများ မေထုန်အကျင့်ကို ပြုကျင့်တာသည် အပြစ်မရှိဟု မှတ်ထင်နေသော သူများ ရှိပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသို့သောသူများအတွက် တင်ပြပေးပါမည်။
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံတွင် မသွားကောင်းသော မိန်းမ(၂၀)ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ထိုအထဲတွင် အမိ၊ အဖ၊ မိဘနှစ်ပါး၊ အကိုမောင်၊ အမညီမ၊ ဆွေမျိုး၊ အမျိုးအနွယ်၊ သူငယ်ချင်းများ အုပ်ထိန်းသော မိန်းမ(၈)ယောက်တွင် ကျူးလွန်သော ယောက်ျား၌ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ အပြစ်ထိုက်၍ ကျုးလွန်ခံရသော မိန်းကလေးမှာ အပြစ်မထိုက်ပါ။ သို့သော် တစ်ချို့သော ယောက်ျားလေးများက ပြောပေလိမ့်မည်။ မိန်းကလေးက သဘောတူ၍ ပြုကျင့်တာ အပြစ်မရှိဟု။ တရားဝင် စောင့်ရှောက်သူများ၏ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ကာမကို ယူခြင်းကြောင့် အပြစ်ရှိပေသည်။ နှစ်ဦးသဘောဖြစ်၍သာ အပြစ်နည်းနည်း လျော့ရုံသာဖြစ်သည်။ နှစ်ဦးသဘောမတူပါက ပို၍အပြစ်ကြီးသည်။ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ကျုးလွန်တဲ့အခါ အလိုတူမဟုတ်ဘဲ အနိုင်အထက်ပြုကျင့်ရင် အပြစ်ပိုကြီးပြီး နှစ်ဦးသဘောတူလို့ ကျူးလွန်ရင်တော့ အပြစ်နည်းနည်းသာ လျော့ပါတယ်။ နှစ်ဦးသဘောတူ ကျုးလွန်တဲ့အခါမှာလည်း ကိလေသာအားကြီး,မကြီး၊ လုံ့လအနည်းအများလိုက်ပြီး အပြစ်အကြီးအသေး ကွာခြားပါတယ်။
ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ မိန်းကလေးဘက်ကလည်း သဘောမတူဘဲ ကျူးလွန်လျှင် ထိုသူသည် အပြစ်များစွာ ထိုက်ပေသည်။ သီလရှိသော မိန်းကလေးကို ကျူးလွန်မိလျှင် ပို၍ပို၍အပြစ်များပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရှေးဆရာကြီးများက ´မိန်းမနှစ်ကျိပ်၊ ပျော်ကြောင်းသိပ်လည်း၊ မအိပ်လေရာ´ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။ မိန်းမများက ခေါ်အိပ်သည့်တိုင် မိမိကိုယ်ပိုင်မိန်းမမှတစ်ပါး မိန်းမ(၂၀)နဲ့ မအိပ်ကြဖို့ ဆုံးမခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
မိန်းကလေးများက သူတို့၏ ကာမကို မည်သူကမျှ တရားဝင်စောင့်ရှောက်သူများထံမှ လာမတောင်းထားသေးပါက သူတို့ကိုယ်ပိုင် ဖြစ်နေသေး၍ အပြစ်မရှိခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ စောင့်ရှောက်သူများထံမှ တရားဝင်တောင်းပြီးသော စေ့စပ်ပြီးသော မိန်းကလေးများ တစ်ပါးသူနဲ့ ဖောက်ပြန်ပါက အပြစ်ရှိပေသည်။ ကာမကို ကိုယ်မပိုင်တော့သောကြောင့်တည်း။
အမျိုးသားဘက်ကလည်း လွတ်လပ်သူမှန်ကန်မယ် အမျိုးသမီးဘက်ကလည်း စေ့စပ်ထားသူစတဲ့ ပိုင်ဆိုင်သူမရှိသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ မိဘသဘောမတူလို့ ခိုးထွက်ပြေးပြီး နှစ်ဦးသဘောတူ ရုံးတက်လက်မှတ်ထိုးကာ လွတ်လပ်စွာ မယားအမှတ်နဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရင် ဆန္ဒ၀ါသီနီ-အလိုတူနေလို့ မယားအရာမြောက်တဲ့အတွက် ကံမထိုက်ပါ။
ဒီနေရာမှာ လက်မှတ်ထိုးတဲ့ရုံးဌာနဟာ နိုင်ငံတော်က လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့ နေရာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်သူများဆိုတာ ပြည်သူများရဲ့အုပ်ထိန်းသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရုံးတက်လက်မှတ်ထိုးတာဟာ တရားဝင်ဖြစ်သွားလို့ ကံမထိုက်တာပါ။ တကယ်လို့ မိမိတို့က တရားဝင် လက်ထက်ယူမယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိပြီး နှစ်ဦးသဘောတူ လွတ်လပ်တဲ့ချစ်သူများ ကျုးလွန်မိကြရင် လက်ထက်မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် အပြစ်အနည်းငယ် သေးပါသေးတယ်။ သို့သော် လက်မထက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ကံထိုက်တဲ့အတွက် အပြစ်ပိုကြီးပါလိမ့်မယ်။
ကာမပိုင်ရှိတဲ့သူဟာ လူဇာတ်မဟုတ်တဲ့ တိရိစ္ဆာန်တို့နဲ့ ကျူးလွန်ရာရင်လည်း ကာမေသုမိစ္ဆာစာရဖြစ်ပါတယ်။ ဘူရိဒတ်နဂါးမင်းကြီးဟာ သီလ ဆောက်တည်ကြောင်း၊ ယုန်, ဖျံ, မြေခွေး, မျောက်တို့သည်လည်း သီလဆောက်တည်ကြောင်းကို ကျမ်းဂန်တို့၌ လာရှိတဲ့အတွက် တိရစ္ဆာန်များမှာလည်း ငါးပါးရှစ်ပါးစတဲ့ သီလများရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိရိစ္ဆာန်နဲ့ကျုးလွန်ရင်လည်း ကံထိုက်ပါတယ်။ ကောသလဘုရင်ရဲ့ မိဖုရားကြီးဖြစ်တဲ့ မလ္လိကာဟာ ခွေထီးနဲ့ဖောက်ပြန်မှုကို သာယာမိခဲ့လို့ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ အပြစ်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။
အရူးမကို မိဘစသည်တို့က၄င်း၊ တစ်ယောက်ယောက်က၄င်း၊ အုပ်ထိန်းသူရှိရင် ကျုးလွန်သူမှာ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ထိုက်ပါတယ်။ ယောက်ျားချင်းချင်းသော်လည်း ၀စ္စမဂ်၊ မုခမဂ်တို့ကိုကျူးလွန်ရင် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ ကံထိုက်တယ်လို့ ဆရာကြီးတော်များ မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ထုံးစံဓမ္မတာမို့သာ မိန်းမကို ကာမေသုမိစ္ဆာ စာရအရ ယူကြတာပါ။ ယောက်ျားကိုလည်း ကာမေသုမိစ္ဆာစာရအရ ယူရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ယောက်ျားချင်းချင်း ကျုးလွန်ရာတွင်လည်း မိန်းကလေးများနည်းတူ အုပ်ထိန်းသူရှိသူမယ် ကာမပိုင်ရှိမယ်ဆိုရင် ကံထိုက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိမိတို့ဟာ သူတစ်ပါးသား၊သမီး၊ဇနီး၊လင်များကို ကျုးလွန်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာရင် ငါကျုးလွန်မယ့် မိန်းကလေး၊ ယောက်ျားလေးနေရာမှာ ငါ့ရဲ့မယား၊ချစ်သူ၊မိခင်၊အမ၊နှမကို သူများကကျုးလွန်မယ်ဆိုရင် ငါဘယ်လိုခံစားရမလဲ? ပြီးတော့ ငါ့လင်၊ငါ့မယား၊ငါ့ချစ်သူဟာ သင်ဖောက်ပြန်သလိုမျိုး သူများနဲ့ဖောက်ပြန်ရင် သင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲ? ဝဋ်ဆိုတာ လည်နေတယ်ဆိုတာ သတိရစေချင်ပါတယ်။ အခုဘဝမှာ ဒီလိုလူမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံဆုံရတာဟာ မိမိကိုတဖန် ပြန်ဝဋ္ဋ်ကြွေးဆပ်စေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမပြု မိမိမှုပါပဲ။ “သင့်ပြုသောကံ ပဲ့တင်သံ သင့်ထံပြန်လာမည်” ဒီဆောင်းပုဒ်လေးကို ဆောင်ထားရင် အကုသိုလ်ကို ရှောင်ကြဉ်စိတ်တိုးပွားလာမှာပါပဲ။
အဲဒီလူနေရာမှာ ငါဆိုရင်ရော ဘယ်လိုခံစားရမလဲ စတာတွေ တွေးတောကြည့်ရပါမယ်။ အဲဒီလိုတွေးတောတဲ့အခါမှာ မိမိရဲ့ မယား၊ချစ်သူ၊ မောင်နှမ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းများနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် မိမိစိတ်ရဲ့ခံစားချက်အတိုင်း တစ်ဘက်လူမှာလည်း သူနဲ့ဆက်စပ်သူများ ဘယ်လိုခံစားရမယ်ဆိုတာ တွေးဆကြံဆ နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုသာ ရှေးနောက် စဉ်းစားတွေးခေါ်မယ်၊ မိမိစိတ်ကို သတိဖြင့် ထိန်းချုပ်မယ်ဆိုရင် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ အမှုများမှ ရှောင်ကြဉ်နိုင်မှာပါ။
ရှေးဆရာတော်ကြီးများက “ကာမရောဂါ ကိုယ်တွင်းနာ ကို ဟီရိဩတ္တပ် ပညာညှပ်၍ နှိပ်ကွပ်နိုင်ပါတယ်”လို့ မိန့်ဆိုထားတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို မိမိတို့က ကာမကိစ္စဟာ ဟီရိသြတ္တပ္ပကင်းမဲ့တဲ့ အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိတရားဝင်ယူထားသူမှလွဲ၍ တခြားသူများကို မပြစ်မှားမိအောင် ပညာဉာဏ်ကို သတိဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားရပါမယ်။ လူသားများမှာ မိမိတရားဝင်ယူထားတဲ့ ဇနီး၊မယား၊လင်သားတို့နဲ့ ကျုးလွန်လို့ရပါတယ်။ ရဟန်းသံဃာများမှာ ဘယ်သူနဲ့မှ ကျုးလွန်လို့မရပါဘူး။ ကိလေသာ မကင်းသေးတဲ့ လူအတူတူ ရဟန်းသံဃာများတောင် ကာမကိစ္စကို ထိန်းနိုင်သေးရင် လူသားများလည်း မိမိတရားဝင် ကျုးလွန်လို့ရတဲ့ဟာမှတစ်ပါး တခြားဟာကို မကျုးလွန်မိအောင် စောင့်ထိန်းနိုင်ရမှာပါ။
“ငါတို့လူတွေက ဒါတွေမစောင့်ထိန်းနိုင်လို့ ဒီလိုနေတာကွ” ဆိုရင်လည်း တရားဝင်ယူပြီး ကျုးလွန်လို့ရတာနဲ့ မလုံလောက်သေးဘဲ စိတ်တိုင်းကျ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ကျုးလွန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ နောက်နောင်ဘ၀တွေမှာ ကိုယ့်အလှည့် ကျရောက်လာမှာမို့ ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ပြင်ဆင်ထားရပါလိမ့်မယ်။ မိမိက ကံကောင်းလို့ မြင့်မြတ်တဲ့ယောက်ျားဘ၀လေး ရလာတာကို နောက်ဘ၀တွေမှာ ထပ်ကံကောင်းအောင်မလုပ်ဘဲ မြင့်တဲ့ဖိုဓာတ်ဘ၀ကနေ ယုတ်နိမ့်တဲ့ မဓာတ်ဘ၀ကို ရောက်အောင် လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်အလှည့်လည်း ခံရဦးမယ်ဆိုတာ မမေ့ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်ယောက်ျားဘ၀ ရတုန်းကတော့ ထင်တိုင်းကျဲလာခဲ့ပြီး ကိုယ့်အလှည့်ကျမှ ကြောက်ပါပြီ မဖြစ်ကြပါစေနဲ့။ အဲဒီလိုမဖြစ်အောင် ယခုရရှိနေတဲ့ လူ့ဘ၀လေးမှာ မမှားသင့်တာ မမှားရအောင် သတိထားနေထိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
မိန်းကလေးများကလည်း မိမိတို့ အရင်ဘ၀တွေက မကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့ ယခုမျက်မှောက်မှာ ယုတ်နိမ့်တဲ့ဘ၀ရနေတာကို ကျေနပ်မနေဘဲ နောက်နောင်ဘ၀တွေမှာ မြင့်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားဘ၀ရအောင် ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမ တန်းတူယှဉ်နိုင်ပါတယ် ပြောပါစေ…. ယုတ်နိမ့်တဲ့ဘ၀၊ အနိမ်ခံရတဲ့ဘ၀၊ အနိင်ကျင့်ခံရတဲ့ဘ၀ကတော့ မလွတ်တာအမှန်ပါ။ အဲဒါကြောင့်မို့ မိန်းမဘ၀ကနေ ယောက်ျားဘ၀ရဖို့အတွက် ယခုဘ၀မှာ မိန်းကလေးဣနြေ္ဒနှင့်နေပြီး မမှားသင့်တာ မမှားရအောင် သတိထား နေထိုင်ရပါမယ်။
ဒါကြောင့် လူသားအားလုံး ရရှိလာတဲ့လူ့ဘ၀လေးမှာ မမှားသင့်တဲ့အမှားများ မပြုလုပ်မိအောင် သတိထားဆင်ခြင်ကာ နောက်အနာဂတ် ဘ၀များ ကောင်းစားရေးကိုသာ အဓိကထား လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ယခု မိမိတို့ဟာ လူ့ဘ၀ကိုရနေပြီမို့ ဒီဘ၀မှာ ကြုံရမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဟာ အသေးအဖွဲလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဘ၀များစွာဟာ မိမိဘယ်လိုဘ၀တွေရောက်ပြီး ဘယ်လိုဆင်းရဲတွေ ကြုံရဦးမလဲဆိုတာ မသိနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် မသိနိုင်သေးတဲ့ဘ၀ကို ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရအောင် ယခုကတည်းက ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ တကယ်လို့ မိမိတို့က အမှားတွေပဲလုပ်ပြီး လူ့ဘ၀ကြီးကို ဖြတ်သန်းသွားမယ်ဆိုရင် ဒု၊တ၊န၊သော လေးယောက်ကဲ့သို့ နောက်မှနောင်တ တွေရနေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုနောင်တတွေမရဖို့ရန် ယခုကတည်းက မမှားသင့်တာမမှားရအောင် သတိထားကြပါကုန်။
အခုခေတ်လူငယ်များ မသိ၍ကျုးလွန်မိမှာဆိုးသောကြောင့် တင်ပြပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ တကယ်တော့ ကာမဂုဏ်စိတ်ဟာ မိမိရဲ့စိတ်ထိန်းနိုင်မှုပေါ်မှာ မူတည်ပါပေသည်။ တဏှာကို ပယ်သတ်နိုင်သော ရဟန္တာမဖြစ်သေးသမျှ ပုထုဇဉ်လူသားတိုင်းတွင် ထိုစိတ်များရှိပေသည်။ ထိုတွင် စိတ်ထိန်းနိုင်မှုနှင့်မထိန်းနိုင်မှုသာ ကွာပေလိမ့်မည်။ စိတ်ထိန်းနိုင်သောသူသည် အပြစ်မရှိ၍ ဒုက္ခ မရောက်ပေ။ စိတ်မထိန်းနိုင်သောသူသည် ယခုဘ၀လည်း ဒုက္ခတွေ့ နောင်ဘ၀လည်း ဆင်းရဲပေလိမ့်မည်။ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ၏ ဆိုးကျိုးများကို သာဓကဖြင့် တင်ပြပေးပါမည်။
အထက်ပါ မိန်းမ(၂၀)မှ တစ်ကနေရှစ်အထိ ပါဝင်နေသော မိန်းကလေးများမှာမှု ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံတော့ မထိုက်ပေ။ သို့သော် ယောက်ျားများအား သွေးဆောင်မာယာများမှုရှိပါက အကုသိုလ်အပြစ်တော့ ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ပြင် အိမ်ထောင်ကျပြီးသူများသည် မိမိတရားဝင်ယူထားသော မိန်းမမှတစ်ပါး ကျန်သောသူများနှင့် အယုတ်ဆုံး ပြည်တန်ဆာမနှင့် ကျုးလွန်လျှင်လည်း ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ထိုက်ပေသည်။
အိမ်ထောင် မကျသေးသောသူများသည် အုပ်ထိန်းသူက ခွင့်ပြုထားသော ပြည်တန်ဆာမလည်းဖြစ်၊ ကာယကံရှင် ပြည်တန်ဆာမကလည်း ကြည်ဖြူမည်၊ သူများစပွန်ဆာ ပေးထားတာလည်း မရှိသေးလျှင် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ မထိုက်ဘဲ ရာဂသောင်းကျန်မှု အကုသိုလ်အကြီးစား ဖြစ်ပေသည်။ ထိုနေရာ၍ တစ်ခုပြောချင်သည်မှာ ကိုယ်ပြုသောကံ ကိုယ့်ထံပြန်လာမည် ဆိုတာသိစေချင်ပါသည်။ ကိုယ်ကပွေလျှင် ပွေသောသူနှင့်တွေ့မည်။ ၀ဋ်ဆိုသည်မှာ လည်တတ်စမြဲပင်။ ၀ဋ်ဆိုသည်မှာ အင်မတန် ကြောက်စရာကောင်းပါသည်။ ပြီးလျှင် ထိုကဲ့သို့ ပွေသောသူများအတွက် AIDS လေးလုံးရောဂါကလဲ ကြိုဆိုနေလိမ့်မည်။
ကာမေသုမိစ္ဆာရကံသည် အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသော အပြစ်ဖြစ်ပေသည်။ ကျွတ်တမ်းဝင်မည့် အရှင်အာနန္ဒာ၊ ဣသိဒါသီထေရီမ ပါရမီရှင်ကြီးများသည်ပင် ကျွတ်တမ်းဝင်မည့် ဤဘဒ္ဒကမ္ဘာ တစ်ခုသောဘ၀တွင် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံကို ကျူးလွန်မိခဲ့သောကြောင့် ဆင်းရဲပေါင်းစုံနဲ့ ကြုံတွေ့ခံခဲ့ရပေသည်။ အရှင်အာနန္ဒလျောင်းလျာသည် ငရဲ၌ နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ လူပြည်၌ မိန်းမဘ၀၊ ပဏ္ဍုတ်ဘ၀တို့ ဖြစ်ခဲ့သည့်အပြင် တိရစ္ဆာန်ဘ၀ပေါင်းများစွာတို့၌ အထီးဖြစ်သော်လည်း ဝှေ့စေ့အထုတ်ခံရသော ဆင်းရဲဒုက္ခများစွာဖြင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေသည်။
ဣသိဒါသီထေရီမသည်လည်း ကျွတ်တမ်းဝင်မည့် ဤဘဒ္ဒကမ္ဘာ လူ့ဘ၀တစ်ခုဝယ် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံကို ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ငရဲ၌နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒုက္ခခံရပြီးနောက် ကျွတ်တမ်းဝင်မည့် ယခုဘ၀ပင်လျှင် လင်ယောက်ျားအမျိုးမျိုးကို မိန်းမကောင်းအင်္ဂါဖြင့် ပြုစုပေးခဲ့သော်လည်း လင်ယောက်ျားတို့၏ စွန့်ပစ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပေသည်။ မိဘများက ချမ်းသာပြီး သူ့၏ရုပ်အင်္ဂါကလည်းလှ မယားကျင့်ဝတ်လည်းညီအောင် နေပေခဲ့သော်လည်း ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံကြောင့် ယောက်ျားများ၏ စွန့်ပစ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီးမှ ရဟန္တာထေရီမဖြစ်ခဲ့ရပေသည်။
လောက၌ မိတ်ဆွေကောင်းလျှင် ကောင်းကျိုးများရသကဲ့သို့ အပေါင်းအသင်းများ မကောင်းလျှင်လည်း ယခုဘ၀တွင် မကောင်းမှုများ ပြုလုပ်တတ်ကြပေသည်။ အပေါင်းအသင်းမကောင်း၍ မကောင်းမှုများလုပ်မိလျှင် ယခုဘ၀တွင်လည်း ဘ၀ပျက် လမ်းဘေး ရောက်တတ်သလို နောင်ဘ၀တွင်လည်း ဆိုးကျိုးများနဲ့သာ ရင်ဆိုင်ရပေလိမ့်မည်။
တစ်ချို့က သူများက မြောက်ပင့်ပြောဆိုပေးလျှင် ကောင်းတဲ့အလုပ်လား မကောင်းတဲ့အလုပ်လားဟု မစဉ်းစားမဆင်ခြင်ဘဲ လုပ်တတ်ကြပေသည်။ တစ်ချိ့က သတ္တိရှိတာနှင့် မိုက်မဲတာကို မခွဲခြားတတ်ပေ။ ကောင်းတဲ့အလုပ်ကို သူများထက်သာအောင် သူများမလုပ်ရဲ သည့် အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကိုသာ သတ္တိရှိခြင်းဖြစ်ပြီး မကောင်းမှုကို သူများထက်သာအောင် သူများမလုပ်ရဲတာကို လုပ်ရဲခြင်းသည် မိုက်မဲခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့ လူ့ဘ၀၀ယ် အပေါင်းအသင်းများ ရွေးချယ်စီစစ် စဉ်းစားဆင်ခြင်ကာ ပေါင်းသင်းတတ်ရန်လည်း လိုပေသည်။
မိမိတို့ရဲ့ ဘ၀ပေါင်းများစွာတွင် လူ့ဘ၀ကိုရဖို့ရန် ခဲယဉ်းသလို ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမများကို သိရှိနားလည်ပြီး ကောင်းမှု မကောင်းမှုကို ခွဲခြားတတ်သောဘ၀ကို ရဖို့ရန်လည်း ခက်ခဲပေသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည် ယခုဘ၀၀ယ် လူ့ဘ၀လည်းရ ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာနဲ့ကြုံတွေ့၍ အသိဉာဏ်ကောင်းလေး ရှိနေချိန်ဝယ် မကောင်းမှုများကို တတ်နိုင်သလောက် ဆင်ခြင်ပြီး ရှောင်ကြဉ်ကြရန် အထူးလိုအပ်ပါကြောင်း စေတနာ မေတ္တာများဖြင့် တင်ပြပေးလိုက်ပါပေသတည်း။
ဒကာမေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေရဲ့ တစ်ခုချင်းစီကိုရော၊ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံထိုက်သည့် အင်္ဂါရပ်များကိုရော၊ မကျုးလွန်သင့်သည့် မိန်းကလေးများကိုရော၊ မကျင့်သင့်သည့်အချိန်ကာလ နည်းစနစ်များကိုပါ ရှင်းပြပြီးဆိုတော့ ဒီလောက်ဆို ရှင်းမည်ထင်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီမှာပဲ ဦးဇင်းရဲ့အဖြေကို နိဂုံးချုပ်ရင်း လူသားအားလုံး ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံမှ ရှောင်ကြဉ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါပေသည်။ အရှင်ကောာမလ(ခ)ဆန်နီနေမင်း သာသနတက္ကသီလဓမ္မာစရိယsanninaymin@gmail.com B.A (Buddhism) M .A (university of Kelaniya) ကိုလံဘိုမြို့၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ။
အောက်ပါကျမ်းစာအုပ်များကို ဖတ်ရှု့လေ့လာပြီး ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) အဘိ၊ ဋ္ဌ၊ ၁၊ ၁၄၁၊
(၃) မဃဒေ၀လင်္ကာသစ် အပိုဒ်-၂၃၂
(၅) ဣတိဝုတ်၊ဋ္ဌ၊ ၂၂၀
(၆) ပဋိသံ၊ ဋ္ဌ၊ ၁၊ ၂၀၄
(ဒါလေးက ကျွန်တော် ဟိုးအရင်နှစ်တွေက download လုပ်ထားတဲ့စာတွေပါ…။ စိတ်ငြိမ်းချမ်းသောဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်…. နှလုံးသားအာဟာရ)
Posted by Ayeit Chit at 06:23
မောင်ငယ်နှင့် ပျောက်ဆုံးသော အနာဂတ်
အိပ်ချိန် ခြောက်နာရီထက် လျော့နည်းသူများ
အချစ် နှင့် လက်ထပ်ခြင်း (ဗဟုသုတ အဖြစ် ဖတ်ကြည့်ပါ)
ကွန်ပျုတာ Speed မြန်အောင်လုပ်နည်း(၅)နည်း
အနိစ္စ ၊ ဒုက္ခ ၊ အနတ္တ
တိုရှင်း ပြတ်သားသော သြ၀ါဒများ
****သင် ဆဲတာကို ငါဘုရားမယူ****
ကဲ့ရဲ့ ခြင်းနဲ့ ဆုံးမခြင်း